स्वार्थ समूहले लुट्यो पुनर्निर्माण - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > स्वार्थ समूहले लुट्यो पुनर्निर्माण
April 25, 2019 April 25, 2019 GRISHI540
ब्यारेकजस्तो एकीकृत बस्तीधुर्मुस–सुन्तलीसँग भेटघाट त भएको छैन तर उहाँहरूले पनि नेपाली शैलीमा घर बनाएको भए हुने भन्ने लाग्छ । पुनर्निर्माणका क्रममा बनेको एकीकृत बस्तीको अवधारणा नै ठीक भएन । एकातिर बस्ती, अर्कोतिर गोठ बनाएर कहाँ हुन्छ ? हाम्रो चलनअनुसार घर र गोठ जोडिएको हुनुपर्छ ।
किन ढुंगामाटो ?हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो सुविधा भनेकै पर्यटन हो । हामी भारत र चीनजस्ता ठूला देशको बीचमा छौं । हामीलाई तीबाहेक देशका पर्यटकसमेत चाहिँदैन । पर्यटकहरूले हाम्रो देशमा हेर्न चाहने भनेको पुरानै शैलीका घरहरू हुन् । उनीहरू आफ्नै देशमा सुपर–मोर्डन भवनहरू बनाइरहेका छन् । हाम्रो भूगोलमा मौलिकता झल्किने घर बनाउनुको विकल्प थिएन ।
भ्रष्ट दिमागले बिग्रियोभुइँचालोले सबैको दिमाग हल्लायो होला भन्ठानेको थिएँ । तर साता दिनपछि नै जस्ता र पाल लुट्न थालिहाले । भ्रष्ट दिमागलाई सुधार गर्न सकिएन । सम्पदा र बस्ती पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा सबैको दाउ केमा फाइदा छ, कसरी बढी कमाइ हुन्छ भन्नेमा गयो । सिंहदरबारकै उदाहरण लिउँ ।
पुनर्निर्माणमा हामी फेल भयौंसमग्रमा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा हामी असफल भयौं । प्रयोग गर्नै नमिल्ने घर बने । तिनको के काम ? पुराना घरहरू जीर्णोद्धार गर्नुपर्थ्यो । सामानहरू पुनः प्रयोग भइदिएको भए पर्यावरणीय दृष्टिले पनि उत्तम हुनेथियो । त्यत्रो भुइँचालोले केही नहुनु हाम्रो भाग्य थियो । त्यही रेक्टर स्केलको त्यत्रै घनत्वको अर्को भूकम्प आयो भने अहिले बनेका कुनै पनि घर बाँकी रहँदैनन् ।